कति चार्ज गर्ने मोबाइल ? - Everest Dainik - News from Nepal
कति चार्ज गर्ने मोबाइल ?
– मोबाइल धेरैबेर चार्ज नगर्नुहोस् । सामान्यतया तीन घन्टा मोबाइल चार्ज गर्दा हुन्छ ।
–पावर बैंकबाट मोबाइल चार्ज गर्दा ब्याट्री छोटो समयमै ड्यामेज हुने सम्भावना रहन्छ ।
–जहिले पनि चार्जका लागि मोबाइल खरिद गर्दा लिएको चार्जर वा उही कम्पनीको चार्जर प्रयोग गर्नुपर्छ । जथाभावी चार्जर प्रयोग गर्दा ब्याट्री चाँडै खराब हुन्छ ।
–प्रायः मोबाइल कम्पनीले खरिद गरेको एक वर्षसम्म ब्याट्री र चार्जरको वारेन्टी दिएका हुन्छन् । तर, मोबाइललाई पानीबाट जोगाउन जरुरी हुन्छ । पानीबाट नजोगिँदा ब्याट्री मात्र होइन, मोबाइल नै बिग्रने डर हुन्छ ।
ट्याग्स: चार्ज, मोबाइल